SPECIAL CARE | Steadfast Trading | Apex Auto Body Shop
# 06616, 16oz. / # 06624, 24oz.
ဤမှန်ဆေးရည်သည် လမ်းမှဖုန်လွှာများ၊ ဆီပေကျံမှုများနှင့် အညစ်အကြေးများကို အကြွင်းမဲ့ ဖယ်ရှားပေးသည်။ မော်တော်ယာဉ်သုံးမှန်၊ ရှေ့မီးကြီး၏ မှန်ဘီလူးများ၊ ကြည့်မှန်များနှင့် ခရုမ်း အများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် ဤမှန်ဆေးရည်သည် အစင်းကြောင်းများ မကျန်ရစ်စေပါ။ ထို့ပြင် ၎င်းတွင် အမိုးနီးယားပါဝင်သည့်အတွက် အရောင်ပါသည့်ပြတင်းမှန်ကို မထိခိုက်စေပါ။
R3-RACING RUBBER REMOVER
# 09224, 24 oz.
Mothers ၏ R3 သည် ဆေးသား၊ မှန်၊ ဗီနိုင်းစနှင့်အခြားမည်သည့် ပြင်ပမျက်နှာပြင်မှမဆို ရာဘာ နှင့် ပွတ်တိုက်ရာများ၊ ဖုန်းများ၊ ရွှံ့များနှင့် အညစ်အကြေးများကို လုံခြုံလျင်မြန်စွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင် သည့် ပက်ဖျန်းပြီးသုတ်ပစ်ရသော သန့်စင်ဆေးဖြစ်သည်။ ခေတ်မီဓာတုဗေဒနည်းလမ်းများဖြင့် ဖော်စပ်ထား၍ စွဲနေသည့်ရာဘာနှင့် အညစ်အကြေးများအတွက် အစွမ်းထက်သော်လည်း ပတ်ဝန် ကျင် မျက်နှာပြင်များအတွက် အန္တရာယ်ကင်းသည်။
CALIFORNIA GOLD WATER SPOT REMOVER FOR GLASS
# 06712, 12 oz.
မည်သည့်ပြင်ပမှန်သား မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဆို စွဲထင်နေသည့် ရေကွက်များနှင့် အစွန်းအထင်း များကို ဖယ်ရှာပေးသည်။ သတ္တုဓာတ်များကိုပျော်ဝင်စေသည့် အားကောင်းသောဓာတ်ကူပစ္စည်း က နေလောင်ထားသည့် သဲမှုန်များ၊ ဆားငန်ရေများ၊ သစ်စေးများ၊ ကတ္တရာစေးများ၊ ပိုမွှားများနှင့် မှုတ်ဆေးစွန်းထင်းမှုများကို ဆွဲယူဖယ်ရှားပေးသည်။ ရှေ့လေကာမှန်များ၊ ပြတင်းပေါက်မှန်များနှင့် ဘေးကြည့်မှန်များတွင် သုံးရန်ဖြစ်သည်။
# 08408, 8 oz
သင့်ကားဆေးသား၏ အချို့နေရာများ၊ ဥပမာ-တံခါးနှင့် နောက်ဖုံးအစွန်းများ၊ တံခါးလက်ကိုင်၊ သော့ပေါက် စသည့်နေရာများသည် ပို၍ထိုခိုက်ခံရသည်။ Mothers ၏ အစင်းအခြစ်ဖျောက် ဆေးကို မည်သည့်ဆေးအမျိုးအစား၌မဆို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆေးသားကိုထိန်းသိမ်းပေးကာ အစင်း အခြစ်ရာများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည် ပေါလစ်တစ်မျိုးပင်ဖြစ်၍ ၎င်းကိုအသုံးပြုပြီးပါက ပုံမှန်အတိုင်း ဖယောင်းတင်ပေးခြင်းဖြင့် လုံခြုံစွာကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။